शनिबारसम्म आंशिक बर्षाको सम्भावना - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार १८:१४
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा बिहिबार राती गोरखासहितका केही स्थानहरुमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै शुक्रबार दिउसो गण्डकी प्रदेश, प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशका केही स्थानहरुमा मेघगर्ज, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । रातको समयमा पनि गण्डकी, बाग्मती, प्रदेशका केही क्षेत्रहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
शनिबार पनि मौसम आंशिक बदली रहने महाशाखाको पूर्वानुमान रहेको छ । दिउसोको समय र रातीको समयमा बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी क्षेत्रहमा पनि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
भारतको बिहारमा रहेका न्यून चापीय प्रणाली र पश्चिमी वायु प्रणालीको प्रभावले गर्दा नेपालको मौसम बदली रहेको छ । महाशाखाको अनुसार प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरुमा हल्का वर्षा भइरहेको र अन्य क्षेत्रहरुमा आंशिक देखि सामान्य बदली रहेको जनाएको छ ।